ENTSHA → Izikhululo zokulahla intsholongwane
Izikhululo zokulahla iintsholongwane / Izikhululo zococeko zezandla yinto entsha ekunikezelweni kwethu njengesixhobo uyilo oluncinci. Isisombululo esibonisa lula imisebenzi yokubulala iintsholongwane ngesandla kunye ukukhupha inkunkuma.
Ukuhlamba kunye nokubulala iintsholongwane izandla Le yimisebenzi ebalulekileyo yokuthintela ngokufanelekileyo ukusasazeka kweentsholongwane kunye neentsholongwane, ezifumaneka rhoqo kulusu lwezandla.
Ingakumbi ngeli xesha linzima isifo esikho elizweni jikelele sentsholongwane ye-Coronaiqhube kakuhle inkqubo yococeko kunye nokubulala iintsholongwane isandla kubanegalelo ekunciphiseni kosulelo nasekunciphiseni ukusasazeka kweentsholongwane, kwaye oku hayi kumaziko onyango kuphela, kodwa nakwiivenkile, iivenkile ezinkulu, iimyuziyam, izityalo kwimizi-mveliso, iikofu, iihotele kunye neeresityu, okt kuyo yonke indawo apho kukho amaqela amakhulu abantu.
Bona kwakhona: Inkqubo yokulawula amagumbi okubulala iintsholongwane kusetyenziswa indlela yenkungu eyomileyo
Ukuhlamba rhoqo kunye nokucoca izandla ngaphambi kokungena kwindawo kawonkewonke evaliweyo, kunye nasemsebenzini, ukuthenga kunye neminye imisebenzi kukhokelela ekususweni ngokufanelekileyo kokungcoliseka kunye neentsholongwane ezibangelwa zizifo ebusweni bezandla.
Uninzi lweentsholongwane, kubandakanya i-coronavirus ebangela isifo Covid-19Isixokelelwano se-RNA esigutyungelwe lwelembane enamafutha, esenza ukuba kube lula ukuthintela ukusasazeka kwayo kunye nezifo ngokusebenzisa iikhemikhali ezifana nesepha kunye neyeza lokubulala iintsholongwane.
Umbutho wezeMpilo weHlabathi Ucebisa ukuhlanjwa ngesandla ngesepha kunye namanzi kangangemizuzwana engama-30 kunye nokusetyenziswa kwamalungiselelo okubulala iintsholongwane ngokusekwe kwimin. Iipesenti ezingama-60 zotywala.
Ukongeza, unokuzikhusela kusulelo ngokusebenzisa Iigloves ezilahlayo, iimaski ukugubungela impumlo kunye nomlomo ngokunjalo amalaphu okubulala iintsholongwane awona asetyenziswa rhoqo kwaye achukumisa imiphezulu.
Inkqubo echanekileyo yokuhlamba kunye nokubulala iintsholongwane ngesandla kunciphisa iintyatyambo ezincinci ezikhoyo kulusu lwezandla kusetyenziswa amayeza okubulala iintsholongwane.
Ukuhlikihla isibulali-zintsholongwane kulusu lwezandla kufuneka kuthathe malunga nemizuzwana engama-30 kwaye akufuneki ulibale malunga nenani elifanelekileyo lamalungiselelo, kunye nokubulala iintsholongwane kwiindawo ekunzima ukufikelela kuzo, okt indawo ephakathi kweminwe.
Ukuhlamba rhoqo kunye nokucoceka kwezandla ngesandla, ngaphandle kwento yokuba zibalulekile kukhuseleko lwethuNangona kunjalo, bayomisa ulusu lwezandla, olunokubangela ukusabela komzimba kunye nokuvuvukala kwesikhumba. Ukunciphisa iimpembelelo ezingalunganga zezibulali-ntsholongwane ezisetyenziswe kulusu lwezandla, kufanelekile ukusetyenziswa kwamalungiselelo okuthambisa izandla.
Ukuhlamba izandla, sebenzisa iimveliso ezinolusu.
Izinto zokubulala iintsholongwane Okwangoku esetyenziselwa ukubulala iintsholongwane ngamalungiselelo asekwe kwi-ethyl okanye kwi-propyl alcohol. Eyona ilungileyo ikwanazo nezinto zokuthambisa.
Izikhululo ze-Metalco disinversal
Abasasazi besepha kunye nezokubulala iintsholongwane eziphakanyiswe nguMetcoco zivumela oko ukungafaki idosi efanelekileyo, ekumgangatho ophezulu wokubulala iintsholongwane.
Isikhululo esipheleleyo seColOMBO
Izikhululo zococeko (amanqaku ococeko) zizisombululo ezisebenzayo nezibukekayo, ezifanelekileyo ukusebenzisa naliphi na igumbi.
Izixhobo zethu ziyilelwe njengezikhululo zokucoca izandla kunye nendawo yokuhambisa izinto eziluncedo ekufumaneni ukusasazeka kwe-COVID-19, enje iigloves, imaski okanye amalaphu.
Izikhululo zokulahla intsholongwane zixhonywe ngaphezulu kwisingxobo sentsimbi yangaphakathiowenza imisebenzi umgqomo wenkunkuma.
Izikhululo zokubulala iintsholongwane eMetalco zilula kwaye zinomdla wokusebenzisa iinkqubo ezifanelekileyo kwiindawo zikawonke-wonke nezabucala, ezinjengeeofisi, amaziko okuthenga, izikolo, iindawo zokuzilolonga, iivenkile zokutyela nezinye ezininzi.
Ukongeza, isikhululo sokubulala iintsholongwane sisixhobo esibalulekileyo senkxaso yokuhlangabezana neemeko zococeko emsebenzini nakukhuseleko lomntu ngamnye, ngokuhambelana nomgaqo-nkqubo wabaphathiswa olawula iindlela zokunciphisa ukusasazeka kwe-coronavirus emsebenzini.
Izisombululo ezisetyenziswa kwisikhululo se-Metalco disinversal zivumela ukwenziwa lula kwesixhobo sokusebenza ngesibulala-ntsholongwane, Ukulahlwa kwenkunkuma ngokulula nangokucocekileyo kwaye zenze izitishi zisebenze kwaye zibukeke, kwaye zilungele ukusetyenziswa kwizithuba zangaphakathi.
Isikhongozelo senkunkuma sivumela ingqokelela yococeko kunye ukukhupha inkunkuma.
Iseti yesikhululo sokuthintela ukubulala iMatalco ibandakanya:
Ubungakanani besitishi sokubulala intsholongwane (inguqulelo eneenyawo):
Ubungakanani belenile yangaphakathi: 60 lt
Ubunzima: malunga ne-28 kg
Ukwakhiwa kwesikhululo sokubulala iintsholongwane
Oomatshini bokuchaphazela i-Metalco benziwa ngentsimbi edityanisiweyo okanye ngentsimbi engenasiphene, kunye nephaneli yangaphambili ngombala omnye, ngelixa iipaneli ezisecaleni zifumaneka ngemibala eyahlukeneyo emi-7.
Isikhululo esipheleleyo se-COLOMBO-inguqulelo yentsimbi engenasici
Ezi zikhululo zokubulala iintsholongwane zenzelwe ukusetyenziswa kwangaphakathi kwaye ziyafumaneka kwiinguqulelo ezimbini:
ngesakhiwo sangaphandle senziwe ngokupheleleyo ngentsimbi engenasici
ngesakhiwo sangaphandle esenziwe ngentsimbi exutywe nomgubo, nangaphambili ligqitywe kakuhle
Ngenxa yokusetyenziswa koomatshini ababulala iintsholongwane ngokuzenzekelayo kwiindawo zikawonke-wonke nakwiindawo zeenkampani, amaziko kunye nendawo yokusebenza, kunokwenzeka ukungafumaneki kwesandla
Imodyuli esisiseko ibandakanya:
imingxunya yokubeka ngaphambili eludongeni olungaphambili
igumbi elinomnyango othatyathwe ngaphambili kunye nesibambo sokubeka izinto eziyimfuneko (izicubu, iigloves ezilahlayo, imaski)
umnyango wangaphambili onamacala amabini okuvula
IMAGELANO Isisombululo esinokutshintshwa
Ngokwesicelo somthengi, ezi zinto zilandelayo zongezelelweyo zinokuziswa:
into yokuhluza ngokuzenzekelayo
isibambo sentsimbi engenanto
amavili amane e-ABS endaweni yeenyawo ezihlengahlengiswayo
Isikhululo sokulahla isifo / i-CABRAL dispenser
Sisisombululo esisebenzayo nesicocekileyo esifanelekileyo ngaphakathi kunye / okanye nokusetyenziswa kwangaphandle.
I-dispenser iqulethe ityhubhu yealuminiyam ye-ovalum esebenza njengelitha ye-diski eyi-diski eyi-8 yeelitha kunye ne-aluminium efayo egcina isinyithi sesinyithi.
Isiseko esizixhasayo senziwe ngentsimbi yegalvanized nge-powder-coated finish efana ne-dispenser.
Ukusetyenziswa elunxwemeni kunokwenzeka ukuba kufakwe igumbi lokulwa, elenziwe nge-aluminium, ngaphakathi ityhubhu e-oval enomaleko wezinto zokufaka kunye nesikreyi esine-screw yokubeka entlabathini.
5 / 5 ( 47 iivoti )
Umtshini wokubulala iintsholongwaneIsikhululo sokuzenzisa sesandla ngokuzenzekelayoUKUZUZA Isigcini-ndawoisitishi sokungasebenziindawo yokuqhagamshelaIsango lokubulala iintsholongwaneAmasango okubulala iintsholongwaneUkuhlinzwa ngentsholongwaneIsikhululo esipheleleyo seColOMBOindawo yokubulala iintsholongwaneukubulala iintsholongwane ngesandlaikhemisi ngesandla disinversalixesha lokubulala iintsholongwaneI-disenser yesandla sokuhambisa iintsholongwaneukubulala iintsholongwane komhlaza wezinweleukubulala iintsholongwane izandla kunye nezixhoboimiyalelo yokubulala iintsholongwaneUkubulala iintsholongwane xainyathelo ngesifo somhlaza ukubulala iintsholongwaneayliffe ukungafuneki kwesandlaisandla ukubulala iintsholongwane pdfulwelo ukubulala iintsholongwane ngesandlaamalungiselelo okubulala iintsholongwaneukubulala iintsholongwane ngesandla ngaphambi kokuqokelela igaziukubulala iintsholongwane kwisandla somntwana osanda kuzalwaRossmann isandla ukubulala iintsholongwaneInkqubo yokubulala iintsholongwane ngesandlaUmhlaza ukubulala iintsholongwaneukubulala iintsholongwane ngesandlaisifo sokubulala iintsholongwane kwisaluni yobuhleukubulala iintsholongwane isandla kwisisuukubulala iintsholongwane kwisandlaIsifo sokubulala iintsholongwane esibhedleleukubulala iintsholongwane ngesandlaI-CABRAL dispenseri-ecolab yomhlaza ukubulala iintsholongwaneucoceko lwesandla ukungacocekiUcoceko kunye nokuhlinzwa ngesandlaukucoceka nokucoca kunye nokubulala iintsholongwane isandlaukucoceka izandla nokucoca iintsholongwaneIigloves ezilahlayoxa ukubulala iintsholongwane ngesandlaIMAGELANO Isisombululo esinokutshintshwakugqibaukuhlamba izandla ukubulala iintsholongwaneUkuhlamba kunye nokubulala iintsholongwane izandlaukuhlamba izandla kunye nokungahambi kakuhleUkuhlamba kunye nokubulala iintsholongwane izandla usebenzisa indlela ye-ayliffeInkqubo yokuhlamba izandla kunye nokubulala iintsholongwaneUkuhlamba kunye nokubulala iintsholongwane izandla kwisaluniukuhlamba nokubulala iintsholongwane esibhedleleukuhlamba izandla kunye nokubulala iintsholongwane ngokwendlela yeAyliffeulwelo lokubulala iintsholongwane izandla ezisanda kuzalwaukubulala iintsholongwane ngesandlaindawo yokucocainyani yokususa iintsholongwaneIsikali sokubulala iintsholongwane ngesandlaamalaphu okubulala iintsholongwanesensiva isandla ukubulala iintsholongwaneulusu olusu ngesandlaIimpawu zokujonga iintsholongwaneIzinto zokubulala iintsholongwaneIsitishi sokubonisa ukubulala iintsholongwaneIsikhululo sezibulala-ntsholongwaneIsikhululo sokubulala iintsholongwane ngesandlaIsikhululo sezococekoIsikhululo sezempiloIzikhululo zokulahla iintsholongwaneIzikhululo zokulahla iintsholongwaneIzikhululo ze-Metalco disinversalIzikhululo zokulahla iintsholongwaneIzikhululo zempiloinkungu eyomileyotenzi ngesandla ukubulala iintsholongwaneCacisa ukuba kutheni ukubulala iintsholongwane ngumhlaza kubalulekile emsebenzini wezinweleI-VESPUCCIUmhlaza ukubulala iintsholongwaneIsikhululo senkululeko sokumela isandla simahlaIsandla seSanitizer esime simahlaijeli yokutshabalalisa isifo somhlaza